Executive Engineer (Code-39591) | Dagon Glory Co., Ltd. ﻿
The recruitment company is electrical engineer company located in East Dagon.
၁။ Executive Engineer သည် မြို့နယ်အင်ဂျင်နီယာဌာန၏ လုပ်ငန်းကိစ္စအားလုံးကို တာဝန်ခံဆောင်ရွက် ရမည်။
၂။ စဉ်ဆက်မပြတ် ဓာတ်အားရရှိရေး၊ ဖြန့်ဖြူးရေးအား ကြီးကြပ်ကွတ်ကဲဆောင်ရွက်ခြင်း။
၃။ Break Down များဖြစ်လျှင် အမြန်ဓာတ်အားဖြန့်ဖြူးပေးနိုင်ရေး ကြတ်မတ်ဆောင်ရွက်ပေးခြင်း။
၄။ တရားမဝင်ဓာတ်အားသုံးစွဲမှုများအား ဖော်ထုတ်အရေးယူ တင်ပြခြင်း။
၅။ ဓါတ်အားဖြန့်၏ပျောက်ဆုံးယူနစ်များတွက်ချက်ပေးခြင်း၊ ကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်းနှင့် ပျောက်ဆုံးယူနစ် လျော့ချ ရေးစီမံချက်များရေးဆွဲပေးခြင်း၊ နှင့်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခြင်း။
၆။ ဆောင်ရွက်လိုသည့် System Improvement (SI) လုပ်ငန်းများအား ကွင်းဆင်းတွက်ချက်၍ ရုံးချုပ်သို့ တင်ပြနိုင်ရေး စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ခွင့်ပြုချက်ရရှိပါက သတ်မှတ်ချက်နှင့်အညီ တာဝန်ယူ တည်ဆောက်ခြင်း။
၇။ ထရန်စဖော်မာ လောင်ကျွမ်းချို့ယွင်းပျက်စီးမှု၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုက်မှု ကိစ္စရပ်များအား စိစစ် တင်ပြခြင်း။
၈။ အရေးပေါ်ထိန်းပြင်ကိစ္စရပ်များ၊ လိုင်းဆွဲခြင်း၊ လိုင်းပြုပြင်ပေးခြင်း၊ Transformer တည်ဆောက် ပေးခြင်း ဓာတ်တိုင်ယာဉ်တိုက်ခြင်းကိစ္စ၊ တရားမဝင်ဓာတ်အားသုံးဆွဲမှုကိစ္စရပ်များတွင် ကြီးကြပ် ဆောင်ရွက ပေးရခြင်း။
၉။ လစဉ်စီးပွါးရေးစီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်နိုင်မှု အခြေအနေ စိစစ်တင်ပြခြင်း။
၁၀။ ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုစာရင်းအား စိစစ်၍ ရုံးချုပ်သို့ တင်ပြခြင်း။
၁၁။ လစဉ်မြို့နယ်၏ ဓာတ်အားလက်ခံ/ ရောင်းချ/ အဖွဲ့သုံး/ ပျောက်ဆုံးယူနစ်များနှင့် ပျောက်ဆုံး ရာခိုင်နှုန်းများ အား စိစစ်၍ တင်ပြခြင်း။
၁၂။ လစဉ် လဆန်း (၁) ရက်မှ (၅) ရက်အထိ မြို့နယ်၏ မီတာယူနစ်ဖတ်ချက်များ မှန်ကန်မှု ရှိ/မရှိ ကွင်းဆင်း စစ်ဆေးခြင်း။
၁၃။ ဘဏ္ဍာရံပုံငွေ သုံးစွဲမှု၊ YESC ထံမှ ပြန်လည်တောင်းခံမှုအတွက် WA ရေးဆွဲတင်ပြရေးတွင် တာဝန်ခံကြီးကြပ် ဆောင်ရွက်ရခြင်း။
၁၄။ Business Planအတွက် စီမံချက်များရေးဆွဲခြင်းနှင့် အကောင်အထည်ဖော်ခြင်းတို့တွင် အဓိက အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ပေးရခြင်း။
၁၅။ ဖွဲ့စည်းပုံအရဝန်ထမ်းခန့်ထားရေး၊ နှုတ်ထွက်၊ ရာထူးတိုး၊ ပြောင်းရွှေ့ ကိစ္စရပ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်၍ Operation Manager နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း။
၁၆။ ရပ်၊ ပျက်၊ မီးလောင်၊ ပျောက်ဆုံးမီတာများအား အစားထိုးတပ်ဆင်ခွင့်ကိစ္စရပ်များအား စစ်ဆေး ပေးခြင်း။
၁၇။ ညွှန်ကြားချက်များအား ဆက်လက်ဖြန့်ဝေခြင်းနှင့် ထုတ်ပြန်ပေးခြင်း။
၁၈။ အထက်ဌာနအကြီးအကဲများ၏ တာဝန်ပေးအပ်သည့်ကိစ္စရပ်များအား စစ်ဆေးဆောင်ရွက်ခြင်း။
- BE (EP) or B.Tech (EP)
- လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ၈ နှစ်ရှိရမည်။
- ကွန်ပျူတာကျွမ်းကျင်စွာအသုံးပြုနိုင်ရမည်။ (Word, Excel, Power Point)
- အရှေ့ဒဂုံမြို့နယ်တွင် အလုပ်ဆင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Work location East Dagon.
Company Industry: Electrical engineer company
Executive Engineer Electrical engineer Electrical Dagon Glory Business Electrical Engineering Jobs Electrical Engineering Jobs Electrical engineer company Jobs in Myanmar, jobs in Yangon